Izinkondlo zePhasika: amahle, afushane. Izinkondlo zobuKristu-zihalalisela ngePhasika
I-Easter ibhekwa njengeholidi elikhulu lamaKristu, kokubili phakathi kwama-Orthodox namaKatolika. Ngokwesiko, ukulungiselela i-Easter kuthatha isikhathi eside - ngesikhathi sokuphumula kufanele ugcine ukulinganiselwa okuningi komzimba nokomoya, uthandaze, uvume futhi uhlanganyele. Phela, kubalulekile ukuhlangabezana nePhasika ngenhliziyo enomusa, imicabango ehlanzekile nengqondo evulekile. NgeSonto likaKristu akuyona nje kuphela ukuphela kwePente Elikhulu, kodwa umkhosi wokunqoba kokuphila phezu kokufa, okuhle ngokubi. Ngosuku olunjalo kuyisiko ukuhalalisana, ukubiza izihlobo, ukuthumela imilayezo ye-SMS kubo bonke abangane nabangane. Lungiselela amavesi okuqala e-Easter ngokubeka ucezu lomphefumulo wakho emigqeni - isipho esinjalo sizokhunjulwa isikhathi eside. Uma ufuna ukujabulisa futhi unake umuntu, sebenzisa ukukhethwa kwethu kwamavesi angamaKristu e-Easter. Lapha uzothola amavesi amahle e-Easter, kanye namavesi amancane -halalisela ukuthi ngeke ushiye noma ubani ongenandaba neholidi elinjalo elikhanyayo.
Amavesi angamaKristu e-Easter 2016 - ukuhalalisela usuku oluNgcwele
Ngakho iLente Elikhulu laphela, neSonto LikaKhanya likaKristu elibusisiwe lafika. Ekuseni, etafuleni lemikhosi, yonke imizi iqoqwe futhi ilungiselela ukuhlangabezana nalolu suku olujabulisayo. Wonke umuntu uyakwazisa, uKristu, bayajabula. Isikhathi sokukhumbula futhi sisho izinkondlo ezinhle zama-Easter ngezifiso ezinhle kakhulu. Ngenxa yalokhu, akusikho isidingo sokuba nesipho senkondlo - sikunikeza iqoqo langempela lamavesi angamaKristu e-Easter. Imisebenzi ingafundwa ngokuzwakalayo etafuleni lokugcoba, ithunyelwe kuma-sms noma e-mail. Siyakuhalalisela!
Ukuthinta amavesi e-Easter 2016 - ukuhalalisela ngeSonto likaKristu
I-Easter ibonisa insindiso yomuntu wesintu nguJesu Kristu. Kulesi sikhwama esikhanyayo, abantu abanomfudumalo abaphathanayo, bamukela ukuhalaliswa ngezihlobo, abangane kanye nabajwayele. Khetha izinkondlo ezihle kakhulu futhi eziqotho-ukuhalalisela i-Easter, ezosithinta umphefumulo womuntu futhi izokhunjulwa isikhathi eside. Ikakhulukazi kuleli holide enkulu sikulungiselele izinkondlo zangempela zePhasika - nizinikezele kulabo abathandekayo nabathandekayo!
Izinkondlo ezimfushane-zihalalisela ngePhasika 2016
NgeSonto lika-Easter, imibhalo emihle ibanjwe ePhalameni eliPhezulu lePhasika, futhi amakholwa abuthana ngemuva kwetafula elihlelekile futhi aphule ngokushesha. Amaqebelengwane, amaqanda adayiwe, nezinye izitsha ezihlwabusayo zePhasika ziza esikhundleni sezitsha ezithobekile ze-Lent. Ezinsukwini zeSonto LikaSvetlaya, kuyisiko ukuhlangana nezihlobo, ukuvakashela, ukushintshanisana ukuhalalisela. Yabelana nezihlobo nabangane amazwi omusa - ngosizo lokukhethwa kwezinkondlo-siyakuhalalisela iPhasika.
Izinkondlo ezinhle zama-Easter - imikhonzo ka-Easter nezifiso
Ukuhlakanipha kwePhasika yiyona eqotho futhi efudumele, ephethe incazelo ejulile nencazelo. Ngalolo suku sidumisa iNkosi futhi sihlanganyela injabulo yethu nabathandekayo bethu. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukukhetha amagama afanelekayo okubonga, okuyokhunjulwa futhi kuzohlala enhliziyweni isikhathi eside. Sikunikeza izinkondlo ezinhle ze-Easter - zingashintshaniswa namaqanda ama-Easter. UKristu uvukile! Iholidi lika-Easter lenza amakholwa acabange ngoNkulunkulu, mayelana nesiphetho sabo, ngokusindisa umphefumulo. Ngakho-ke, emvuthweni wokugubha kanye nenjabulo, kufanele sikhumbule okuyisisekelo sePhasika futhi sibambelele kumasiko. Izinkondlo zobuKristu zePhasika, ukuhalalisela amahle amahle akunakufaneleka kangcono ngosuku olunjalo oluhle kakhulu. Yabelana nabanye ngomlayezo ojabulisayo futhi ngokuphindaphindiwe wamukele icala elifanayo lokuhle.
Izinkondlo ezingcono kakhulu zokubingelela ngePhasika ngezihlobo nabangane
Siyakuhalalisela ngeNew New Year 2017 Cock - funny, funny, iDemo SMS in ivesi kanye prose ngesiRashiya kanye nesiNgisi. Siyakuhalalisela umama nobaba, ugogo nomkhulu ngokufika konyaka omusha.
Amavesi amahle ngamaSuku KaMama kusukela endodaneni nendodakazi endala. Izinkondlo ezinomusa nezinsuku ezimfushane mayelana nomama ezinganeni zasenkulisa
Ikhadi leposi elihle ngomhla ka-9 Meyi ngezandla zami ngezigaba
Ukwehliswa kwemithi - ukwedlula ngokweqile ubisi kumama onesihlengikazi
Ukuhlobisa, ukuqoqa imfashini
Kungani umlilo uphupha?
Indlela yokugcina inhlonipho, uthando kanye nesifiso emshadweni
UJulia Kovalchuk - "Abakhiqizi abazange bakholwe, kodwa ngathatha futhi ngashiya ..."
Iseluleko sokuvikela amalungelo isiguli
Izitsha ezilula futhi ezimnandi ezivela kumikhiqizo etholakalayo
Ukunakekelwa kweLil ngamakhambi abantu
Amashiya nombala we-eyelashes: yini okudingeka ukwazi?
U-Anastasia Volochkova wahleka umhloli we-DPS
Burrito ngenyama kanye ne-avocado
Inkukhu ihamba nge ham kanye noshizi